Nanambara ny sasany amin'ireo zava-baovao ao amin'ny Android Wear 2.9 | Androidsis
Eder Ferreño | | SmartWatch, Android Version
Vao herinandro lasa izay dia nanomboka nahatratra famantaranandro ny Android Wear 2.8, saingy saika nahavita ny fanavaozana manaraka ny famantaranandro i Google. Na dia tsy rafitra mandalo fotoanany tsara indrindra aza io orinasa io dia tsy kivy. Noho izany, miasa tsy tapaka amin'ny fanatsarana vaovao izy ireo. Ankehitriny, manambara ny fahatongavan'ny Android Wear 2.9.
Toy ny mahazatra rehefa tonga ny kinova vaovao dia manao izany amin'ny vaovao. Andiana fiasa vaovao maromaro no ampidirina amin'ny famantaranandro izay mampiasa ity rafitra fiasa ity. Ary vaovao tena mahaliana izay ho tian'ireo mpampiasa azy.
Tamin'ny fiandohan'ity volana Janoary ity ihany dia nanomboka ny fametrahana ny Android Wear 2.8. Fanavaozana ity izay mamela antsika zava-baovao maro izay efa noresahintsika. Saingy ny orinasa tsy mandany fotoana, satria ny fanavaozana manaraka dia saika vita.
Google dia efa nanambara ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ho an'ny famantaranandro marani-tsaina. Ny zava-baovao ilaozany antsika dia ny fanoherana ireo fampandrenesana tsy voavaky. Hiseho eo amin'ny efijery an-trano ity takelaka ity amin'ny fotoana rehetra. Haneho antsika raha misy ny fanamarihana izay tsy hitantsika. Matetika dia antenaina hiseho eo ambanin'ny efijery izy. Na dia efa naneho hevitra aza izany ny mpampiasa dia afaka manamboatra azy.
Ireo zava-baovao ao amin'ny Android Wear 2.9 dia mikendry ny hanamorana ny asan'ny mpamorona rehefa mamorona fampiharana ho an'ny smartwatches izy ireo. Manomboka izao dia tsy mila kaody manokana intsony ianao. Ny hevitra dia hoe mora kokoa ho an'ny rehetra ny fizotrany. Ho fanampin'izany, ampidirina ihany koa ny lahasa iray manaova sarin'akanjo mijery mahomby kokoa, rehefa misy kisary na sary lehibe.
Google dia nilaza fa ho tonga ity kinova ity afaka volana vitsivitsy. Noho izany, handeha hampiditra izy ireo vaovao bebe kokoa ao amin'ny Android Wear 2.9 rehefa ela. Ka mila mailo tsara isika amin'izay hampidirin'izy ireo amin'ity fanavaozana vaovao ity. Amin'izao fotoana izao daty famoahana tsy fantatra, ka tsy maintsy miandry isika mandra-panamarinan'ny Google zavatra momba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android Wear 2.9 dia hanana kaontera ho an'ny fampandrenesana mbola tsy voavaky
Ny lalao zava-misy virtoaly tsara indrindra ho an'ny Android
Navoaka ny daty famoahana ofisialy Galaxy S9